Signal ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာကြောင့် Signal ကို အသုံးပြုသင့်တာလဲ? — Anycall Mobile
By Naw Htoo Aung February 26, 20212Mins Read
ဒီနေ့မှာတော့ 2021 Chat Application တွေရဲ့ ထိပ်ပိုင်း App တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ Signal Application အကြောင်းကို မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Application လေးကိုတော့ Android, iOS အပြင် Window, Mac နဲ့ Linux မှာပါ အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Signal ဆိုတာ ဘာလဲ?
Signal ဆိုတော့ WhatsApp, Facebook Messenger လိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရတဲ့ Chat Application မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာဆိုရင် တစ်ရောက်ချင်းစီ Message ပို့နိုင်သလို Group ထောင်ပြီးတော့လည်း Message ပို့နိုင်ပါတယ်။ Group တစ်ခုထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ လူအရောက် 1000 ထိ Group ဖွဲ့ထားနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Sticker တွေ၊ Photo တွေနဲ့ File တွေကိုလည်း မျှဝေနိုင်ပါတယ်။ Voice Call တွေ Video Call တွေလည်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Group Call ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ လူ ၈ ယောက်ထိ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် Signal ကို အသုံးပြုသင့်တာလဲ?
ဘာကြောင့် Signal ကို အသုံးပြုသင့်တာလဲဆိုရင်တော့ Privacy နဲ့ Security ပိုင်းမှာ အရမ်းစိတ်ချရပြီး မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ သင့်ရဲ့ Privacy ကို မည်သူကမှ ဝင်ရောက်စောင့်ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထိ လုံခြုံစိတ်ချရလဲဆိုရင်တော့ Signal ရဲ့ Owner တောင်မှ သင့်ရဲ့ Conversation ကို စောင့်ကြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ Signal ဟာ end-to-end encrypted နည်းပညာကို သုံးထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တခြား Messaging Application တွေဖြစ်တဲ့ WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, iMessage နဲ့ SMS Application တွေထက် ပိုပြီးလုံခြုံစိတ်ချရပါတယ်။ Facebook Messenger မှာဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ပြောသမျှအားလုံးကို Facebook က စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Signal ဟာ အကျိုးအမြတ်ကို အဓိကထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တာကြောင့် သင့်ရဲ့ Data တွေကို စုဆောင်းထားမှာမဟုတ်သလို ကြော်ငြာတွေကိုလည်း ပြပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။
လက်ရှိအနေအထားအရ VPN ကျော်ထားရင် Connection မကောင်းတာတွေ၊ လိုင်းပြတ်သွားတွေကြုံရပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကတော့ VPN ကျော်ပြီး အသုံးပြုစရာမလိုတာကြောင့် သင်ပို့ချင်တဲ့ Data ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပို့နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Signal ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ?
Signal ကို စပြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ Signal Account Register လုပ်ပေးဖို့အတွက် Phone Number တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ပထမဆုံး Play Store ဒါမှမဟုတ် App Store ကနေ Signal Application ကို Download ဆွဲပေးရပါမယ်။ Down ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Signal App ထဲ ဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Continue ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ သင့်ဖုန်းထဲမှတ်ထားတဲ့ Contact တွေကို အသုံးပြုခွင့်ပေးဖို့အတွက် Continue ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Allow ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ Phone Call တွေ အသုံးပြုခွင့်ပေးဖို့အတွက် Allow ကို ထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Region နေရာမှာ Myanmar ကို ရွေးပေးပြီး Phone Number နေရာမှာတော့ သင်အသုံးပြုမယ့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Next ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကမှန်လား တစ်ချက်စစ်ပေးပါ။ မှန်တယ် ဆိုရင်တော့ Ok ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒီနေရာမှာတော့ လူသားဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြဖို့ သူမေးထားတဲ့ မေးခွန်းကို မှန်အောင်ဖြေပေးရပါမယ်။
မှန်သွားပြီဆိုရင်တော့ Verification Code ကို သင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထဲကို ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Account Name နဲ့ Profile Picture ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ PIN Number လေးလုံးကို ရိုက်ထည့်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ Confirm လုပ်ပေးဖို့အတွက် စောစောက PIN Number ကို ထပ်ရိုက်ထည့်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ Signal Chat စတင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
ဒါဆိုရင်တော့ လုံခြုံစိတ်ရတဲ့ Conversation ထဲရောက်သွားပြီဖြစ်လို့ သင့်ရဲ့ Data တွေ ပေါက်ကြားမှာ စိုးရိမ်စရာမလိုတော့သလို သင့် Conversation ထဲဘယ်သူမှလည်း ဝင်ရောက်စောင့်ကြည့်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အားလုံးပဲ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ Safe Zone လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
Location Tracking တကယ်လုပ်လို့ရလား ? ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ ?
Great Firewall ဘာလဲ ? ဘယ်လဲ ?